किन घट्यो नेप्से ? आन्दोलन गर्ने लगानीकर्ताको चेतावनी – Online National Network
किन घट्यो नेप्से ? आन्दोलन गर्ने लगानीकर्ताको चेतावनी
१३ चैत्र २०७४, मंगलवार ०१:४९
काठमाडौं, १३ चैत – लामो समयदेखि निरन्तर घट्दै आएको सेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार ५१ अंकले घटेको छ । सोमबार कारोबार सुरु भएको पहिलो ४० मिनेटमा नै ३ प्रतिशतले घटेपछि सर्किट ब्रेक लागेको बजार अधिकतम ५६ अंकले घटेको थियो ।
तर, अन्त्यमा झिनो अंकले सुधारिएपछि ५१ दशमलव ८९ अंकले घटेर १ हजार १ सय ६८ बिन्दुमा बजार बन्द भएको छ । यो २०७२ पुस २७ गतेयताकै न्यून बिन्दु हो ।
धेरै दिन ओरालो लागेको बजार सोमबार सुधार हुने धेरै लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो । आइतबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विराटनगरमा दिएको अभिव्यक्तिले बजार पुनः घटेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । खतिवडा गभर्नर हुँदा पनि सेयरबजारप्रति सकारात्मक थिएनन् । सोही कारण उनी अर्थमन्त्री भएदेखि नै लगानीकर्ताहरू त्रसित छन् ।
सोमबार नेप्सेको १४ दिने आरएसआई रेसियो १५ दशमलव ९६ स्केलमा रहेको छ । प्राविधिक विश्लेषणअनुसार यसलाई ओभरसोल्ड जोन भनिन्छ । अर्थात्, बजारमा खरिदकर्ताभन्दा बिक्रीकर्ताको चाप बढी रहेको अवस्था हो ।
यसलाई खरिद गर्ने संकेत पनि भनिछ । यस्तो समयमा सेयर बिक्री गर्नुभन्दा खरिद गर्नु उपयोगी हुन्छ । तर, बजार निरन्तर ओरालो लागेकाले लगानीकर्ता होल्ड गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको लगानीकर्ता आइआर सुवेदीले बताए ।
‘नयाँ लगानीकर्ता अब बजारमा रहने मनस्थितिमा छैनन् । उनीहरूले आफूलाई बजारमा फसेको अनुभूति गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजार तत्काल रिकभर नहुने आशंका छ ।’
आत्तिनुपर्ने कारण छैन – बोर्ड
सरकारको मौनताले बजार घटेको लगानीकर्ताले आरोप लगाइरहँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ । बजार यसअगाडि पनि घटेको थियो र अहिले ठूलो विपत्तिको रूप लिन नहुने बोर्डका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक निरिज गिरीले बताए । ‘बजार सधैँ जोखिमयुक्त नै हुन्छ ।
तर, अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र, सूचीकृत कम्पनी खराब छैन । त्यस्तै सरकारको नीतिमा पनि ठूलो नकारात्मक परिवर्तन आएको छैन । भनेपछि बजार घट्नुपर्ने ठूलो कारण नै छैन । त्यसैले यतिवेला धैर्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने । तर, ‘बंैकिङ प्रणालीमा आएको तरलताको कमीले बजार केही प्रभावित पारेको छ ।’
नेप्से परिसूचक भारी अंकले घट्दा लगानीकर्ताले एकै दिन ६० अर्ब ७९ करोड गुमाएका छन् । अघिल्लो कारोबार दिन १४ खर्ब २९ अर्ब रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यस दिन घटेर १३ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ । यो दुई वर्षयताकै कम बजार पुँजीकरण हो ।
२०७२ फागुन ५ गते लगानीकर्ताको सम्पत्ति १३ अर्ब ६३ अर्ब रहेको थियो । सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको सेयर बजार पुँजीकरण (फ्लोट बजार पुँजीकरण) अघिल्लो दिनको तुलनामा रू। २० अर्ब ६९ करोड घटेको छ ।
यसदिन कारोबारमा आएका एक सय ५७ कम्पनीमध्ये प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मात्र सेयर मूल्य बढेको छ । प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका सेयरधनीहरूले यस दिन करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् ।
यस दिन एक सय ४४ कम्पनीका सेयर मूल्य घटेको छ भने बाँकी ११ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य यस दिन १० प्रतिशत घटेको छ भने अन्य १२ कम्पनीको सेयर मूल्य नौ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ ।
सोमबार इन्भेष्टर्स फोरमले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनमा जाने बताएका छन् । बजारको दर्दनाक अवस्थामा पनि सरकार मौन रहनु र सम्बन्धित व्यक्तिले गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकोप्रति फोरमले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले जतिसक्दो छिटो सम्झौता गरिएको अवधिभित्रै पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली लागू गर्न, ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्राधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकहरूलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससीलगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेलगायतका माग फोरमले राखेको छ ।
त्यस्तै, सेयर लगानीकर्ता संघले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसूचकले नकरात्मक प्रवृत्ति देखाइरहँदा पनि सरकारमा रहेका पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निकायहरू मूकदर्शक बनेको आरोप लगाएको छ । – नयाँ पत्रिका दैनिक